Amino Acid(BCAA) Silsilad-laan ah,Qiimaha,Alaab-qeybiyaha Bolise
Amino Acid (BCAA) silsilad laamood
1) Waxay taageertaa koritaanka murqaha xad dhaafka ah;
2) Wuxuu dhisaa xoog iyo awood weyn;
3) Siidaynta waqtigeeda si loo taageero saamaynta anti-catabolic;
4) Taageerada korodhka xoogga iyo cufan;
5) leucine oo muhiim u ah calaamadaha mTOR ee borotiinka;
6) BCAA iyo leucine waxa laga yaabaa inay taageeraan soo kabashada soo hagaagtay iyo xanuunka oo yaraada;
7) Kor u qaadista awoodda jimicsiga dulqaadka oo kordhay;
8) Kaabista waxay bixisaa taageero lid ku ah catabolism;
9) Leucine iyo dheef-shiid kiimikaadka borotiinka muruqa.
Ku saabsan silsilad laamood Amino Acid (BCAA)
Silsilad-laman amino acid (BCAA) waa amino acid leh silsilado alifati ah oo leh laan (atom kaarboon dhexe oo ku xidhan saddex ama in ka badan atamka carbon). Ka mid ah acids amino-proteinogenic, waxaa jira saddex BCAAs: leucine, isoleucine, iyo valine.
Amino acid silsilad laashay ((BCAA) waa kabyada nafaqeynta ee ugu muhiimsan uguna waxtarka badan ee loogu talagalay dadka jecel jimicsiga.
BCAA waxay hoos u dhigi kartaa daalka muruqa, waxay dedejin kartaa soo kabashada, waxay yaraynaysaa lumitaanka asiidhyada amino-yada kale ee muruqyada inta lagu jiro jimicsiga, waxayna ka caawisaa jidhku inuu nuugo borotiinka. La'aanta mid ka mid ah saddexdaas waxay keeni doontaa luminta murqaha.
Si ka duwan asiidhyada amino-yada kale, BCAA waxa ay metabolized ku tahay muruqa, ee maaha beerka. Markaad rabto inaad tababarto jir xoog badan oo awood badan, waxaa lagama maarmaan ah inaad kiciso oo aad murqahaaga ku kiciso heerka gacanta. Amino acids silsilad laashay (valine, leucine, isoleucine) waxay ka kooban yihiin ku dhawaad ​​1/3 borotiin muruqa.